Ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba dia manambara ny fihaonambe manankery momba ny fizahan-tany 2019
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba dia manambara ny fihaonambe manankery momba ny fizahan-tany 2019
Henrietta Elizabeth Thompson Ambasadaoro ary solontena maharitry ny Barbados ho an'ny Firenena Mikambana
The Fikambanana fizahan-tany any Karaiba (CTO) dia nanambara fa i Elizabeth “Liz” Thompson, masoivohon'i Barbados ho an'ny Firenena Mikambana, dia hanao ny lahateny lehibe tamin'ny Konferansa Karaiba momba ny fampandrosoana maharitra fizahan-tany, na fantatra amin'ny anarana hoe Fihaonambe fizahan-tany maharitra (# STC2019) any St.Vincent sy ny Grenadines. Ny kaonferansa 26-29 Aogositra, izay hamaha ireo olana lehibe sasany mifandraika amin'ny faharetana, dia karakarain'ny fiaraha-miasa amin'ny St.Vincent sy ny Grenadines Tourism Authority.
Liz Thompson dia Barbadiana izay niasa tamin'ny politikam-pampandrosoana efa ho 25 taona izao. Masoivohon'i Barbados any amin'ny Firenena Mikambana izy izao. Izy dia teo amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha maro, anisan'izany ny naha voafidy ho mpikambana ao amin'ny Parlemanta nanomboka ny taona 1994 ka hatramin'ny 2008 ary ho minisitry ny governemanta nandritra io vanim-potoana io. Tamin'ny fotoana samihafa dia nitana ny portfolio an'ny Angovo sy ny Tontolo iainana, ny trano sy ny tany, ny fivoarana sy ny fandrindrana ara-batana ary ny fahasalamana izy. Ramatoa Thompson koa dia nitarika orinasan'olom-bitsy tao amin'ny Senat Barbados nanomboka ny taona 2008 ka hatramin'ny 2010.
Nanomboka ny taona 2010 ka hatramin'ny 2012 dia sekretera jeneraly mpanampy an'ny Firenena Mikambana izy, ary manana andraikitra manokana amin'ny iray amin'ireo mpandrindra mpanatanteraka roa ao amin'ny Konferansa Rio + 20 momba ny fampandrosoana maharitra. Amin'ity anjara asany ity dia namolavola ny Initiative Sustainability Sustainability Initiative (HESI) mahomby indrindra izy. Taorian'izay dia nandray anjara andraikitra tamin'ny mpanolo-tsaina maromaro tao amin'ny rafitry ny Firenena Mikambana izy, anisan'izany ny tetezamita avy amin'ny MDG ka hatramin'ny SDG, tao amin'ny Biraon'ny Sekretera jeneralin'ny UN, UNDP, ny filohan'ny fivorian'ny jeneraly ary ny sekretera jeneraly manerantany. fandraisana andraikitra angovo, Angovo maharitra ho an'ny rehetra (SE4ALL).
Liz dia manana traikefa be amin'ny politika sy fifampiraharahana eo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena, ao anatin'izany ireo andrimpanjakana ara-bola iraisam-pirenena sy ao anatin'ny rafitra sy ny fizotran'ny UN. Amin'ny maha-minisitra azy dia nitarika tetikady politika lehibe tany Barbados izy toy ny fampandrosoana maharitra nasionaly ao amin'ny nosy, ny toekarena maitso, ny politika maharitra momba ny angovo maharitra ary ny fanamafisana ny fotodrafitrasan'ny governemanta. Ny fidirana an-tsehatra matihanina dia nahitana consultancy tany Karaiba sy iraisam-pirenena, ho an'ireo sehatra tsy miankina, ny governemanta ary ireo masoivohon'ny Firenena Mikambana.
Liz dia nanao lahateny sy niresaka tamin'ny firenena maro sy tany amin'ny oniversite toa an'i Harvard, Yale, Colombia, ny Oniversiten'i North Carolina, Waterloo ary ny West Indies momba ny olana maro amin'ny fampandrosoana, tontolo iainana ary angovo. Nanoratra taratasy sy lahatsoratra maro momba ireo lohahevitra ireo izy ary mpiara-manoratra boky roa momba ny fampandrosoana maharitra navoaka tamin'ny taona 2014. Izy no voamarina tamin'ny fifampiraharahana, ny famahana ny fifanolanana ary ny fifampiraharahana, mpisolovava amin'ny lalàna (LLB sy LEC) avy amin'ny University of the West Indies ary manana mari-pahaizana Masters roa, MBA ankapobeny misy fanavahana avy amin'ny University of Liverpool sy LLM momba ny lalàna angovo, miaraka amin'ny zaza tsy ampy taona ao amin'ny lalàna sy ny politika momba ny angovo azo havaozina sy ny tontolo iainana, avy amin'ny Robert Gordon University.
Cambria Hotels dia nanambara ny toerana voalohany ao Iowa